Comunità Odinista - WRSP
Stefania Palmisano Linda Gerbaudo
COMUNITÀ ODINISTA MGBE
1968: (March 21): Hundingr-Gisulf mụrụ dị ka Pier Paolo Gauna na Aosta, Italy.
1994: (August): Hundingr-Gisulf guzobere Comunità Odinista (CO) n'oge njem na Iceland na mgbe e guzobere otu bekee bụ Odinic Rite na akwụkwọ akụkọ Belgium. Megin nke otu Fils des Ases bipụtara. N’otu afọ ahụ ọ malitere magazin ahụ Araldo di Thule, e jikọtara ya na CO na ụkpụrụ ha.
1995: Hundingr-Gisulf zutere Gualtiero Cìola (1925-2000), onye ndị CO kwesịrị ntụkwasị obi kpọrọ Walto Hari ma ọ bụ Volksvater (nna nke ndị mmadụ). Ọ nwere mmasị na akụkọ ihe mere eme nke Northern Italy na Germany, na karịsịa na okpukpe na ọdịbendị nke Longobards, ndị German bụ ndị biri na Itali na 568 TOA. Kemgbe 1995, o dere ọtụtụ edemede maka Araldo di Thule.
1995: CO natara nleta site n'aka onye otu Viennese nke Armanen Orden. Ha kpebiri ime emume mbụ ha, akpọrọ agba, na Piedmont na Aosta Ndagwurugwu. Ha debekwara emume kwa ọnwa site na mbipụta nke langbärte kalenda na akwụkwọ ahụ I fuochi di Gambara. Ndị a nwere ụdị nke mbụ nke ememe ha.
1997: Hermandad Ásatrú Argentina, otu ụmụ ụmụ Northern Italy kwabatara na Buenos Aires, kpọtụrụ CO. .tù abụọ ahụ kpebiri ịkwado ma mepụta Alianza del Lobo.
1998: Malite na afọ a ụfọdụ ndị òtù CO emeela ememe na blótar na ndị otu England Odinic Rite.
2000: Hermandad Ásatrú Argentina ghọrọ ihe kwụsịrị. CO kwụsịrị nzukọ nke otu Odinist dị iche iche na mpụga mpaghara Northern Italy wee kpebie ijikwa ụmụnna Italiantali na ụzọ ndị ọzọ.
2007 (May): Nzukọ ntanetị, Nzukọ Odinista, e guzobere ya na mkparịta ụka maka naanị ndị otu.
2010: Enweta obodo abanyekwuwanye ma kewaa ya na nkebi iji duzie uto nke onye ọ bụla.
2017: Hundingr-Gisulf hapụrụ njikwa ọrụ nke CO na Corte di Gambara.
CO bụ mmụọ sitere na mysticism nke German nke onye mgbaasị Guido Von List (1848-1919) duziri yana site na First Anglecyn Church nke Odin, nke Alexander Rudd-Mills hiwere na Melbourne, Australia (1885-1967) ma na-arụ ọrụ site na 1929 ruo 1942. CO nwere mmetụta siri ike site n'aka onye nchoputa Danish nke Odinist Fellowship, Else Christensen (nke a maara dị ka "nne nne") na otu ndị England bụ Odinic Rite (Introvigne na Zoccatelli 2013; Zoccatelli 2013). Hundingr-Gisulf guzobere CO na 1994 n'oge njem na Iceland, na-achịkọta ndị na-eto eto si Piedmont, Aosta Valley, Lombardy na Veneto. Ọ họọrọ njikọ Iceland, ọ bụghị n'ihi njikọ ya na mpaghara Asatruar, kama ọ bụ n'ihi na ọ bụ otu n'ime obodo ọdịnala Europe ikpeazụ iji gbanwee Kraịst.
Mgbe ọ chọpụtachara CO, Paolo Gauna kpọrọ aha Hundingr Gisulf wee ghọọ Go “i “(“ ụkọchukwu ”) nke obodo. Hundingr-Gisulf gbasoro Odinism ọdịnala, mana ọ lekwasịrị anya karịsịa na nketa agbụrụ siri ike. Ebumnuche ya bụ iweghachi okwukwe nye chi ochie nke alaeze ochie, nke dị ezigbo mkpa na nkwenkwe CO. Nzukọ dị n'etiti Hundingr-Gisulf na Gualtiero Cìola na 1995 bụ, oge dị oke mkpa. Cìola mụọ ọdịnala oge ochie nke Northern Italy ruo ọtụtụ afọ ma bipụta ya na 1987 Noi, Celti e Longobardi, akwụkwọ nke gbara Hundingr Gisulf ume nke ukwuu. Mgbe 1995 gasịrị, Cìola kwadoro CO ozugbo wee dee ọtụtụ isiokwu maka akwụkwọ akụkọ l 'Araldo di Thule (Comunità Odinista website nd; Zoccatelli, 2013).
Na 1997, Hundingr-Gisulf na Gualtiero Cìola guzobere ụfọdụ njikọ na mba dị iche iche, dịka Alianza del Lobo. Ha kpaliri Comunità Odinista América, Comunità Odinista Australia na Comunità Odinista Vinland iji kpọkọta ndị nketa ogologo oge biri na North Italy, ọ bụ ezie na ndị otu a arụtụbeghị ọrụ. Ka ọ dị ugbu a, ha na Odinic Rite na-enwe mmekọrịta chiri anya (Comunità Odinista webụsaịtị nd; ​​Zoccatelli 2013).
Nkwenkwe na ozizi CO dị iche na nke ndị ọzọ na-ekpere arụsị Nordic. Ha na-ewere na ha bụ ndị nketa nke otu agbụrụ oge ochie, Longobards ma ọ bụ Lombards, ndị German bụ ndị rutere n'ókèala Italy nke dị ugbu a na narị afọ nke isii. N'echiche a, ha na-akọwa onwe ha dị ka ndị na-ewu ewu ma ọ bụ, ka mma, mmegharị "ọdịnala". [Foto dị n'aka nri] Ha na-ajụ ọdịdị ụwa niile nke ụfọdụ ndị na-ekpere arụsị. Ebumnuche ha bụ edemede nke ọdịnala ọdịnala na ọdịnala ochie nke ala ha, Langbard, nke bụ nkwekọrịta nke okwu ahụ Langbardland. Ala nna a gụnyere mpaghara ugbu a nke North Italy, site na mpaghara Ticino ruo Tuscany, site na Valle d'Aosta ruo Friuli. Site na echiche CO, enwekwara obodo ọzọ dị nsọ, Mba nke Odin, ala nna dị nsọ, na-enweghị oke ala, maka ndị nwere otu agbụrụ na mmụọ (Comunità Odinista webụsaịtị nd; ​​Zoccatelli, 2013).
Maka ebumnuche ndị a, ndị otu kọwapụtara okwukwe ha dị ka ndị agbụrụ (Zoccatelli 2013). Ọbara, njirimara agbụrụ, enweghị ike ịhapụ site na mmụọ, yabụ okpukpe maka ha bụ njikọta nke ndị mmadụ dabere na agbụrụ, mana ọ bụghị n'echiche nkịtị. Ndị ọkà mmụta akọwaala ụzọ a dị ka mkpụrụ ndụ ihe nketa mana, maka CO, njikọ mkpụrụ ndụ ihe nketa abụghị ọnọdụ zuru oke nke ịbụ. Ha ekwuola na agbụrụ agbụrụ ha enweghị echiche ọ bụla ma ọ bụ nke ịkpa ókè agbụrụ, mana ọ na-agbaso usoro mgbagha agbụrụ. Iji ruo eruo isonye na obodo ahụ, ọ dị mkpa isite na mpaghara ugwu Italiantali, ma ọ bụ site na mpaghara Europe ndị yiri ya, na ịnweta ihe ha na-ele anya na ndụ dị mma ma dị mma (Comunità Odinista webụsaịtị nd).
Ndị otu ahụ na-eche na ha jikọrọ ọ bụghị naanị na ndị Longbard kamakwa ndị ọzọ so na akụkụ Celtic cisalpine nke dị na North Italy, ma ọ bụ ndị German ndị ọzọ (dị ka ndị Cimbrian) ndị rutere tupu Longobard na mpaghara Italiantali. Omenala ndị ọzọ a bụ akụkụ nke ihe ha kọwara dị ka “Odinism folkish” nke na-egosipụta mmeghe sara mbara nke CO n’ebe ọdịnala Europe dị.
Ndụ otu dị iche iche dabere na ịgbaso ụkpụrụ atọ: Okwukwe, Omenala na Ezinụlọ. Ọzọkwa, ndị otu ga-agbaso ụkpụrụ omume ọma itoolu ndị a (nke a na-akpọ NNV nke Odinism, nke ndị otu Odinic Rite dekọtara John Yeowell (aka Stubba) na John Gibbs-Bailey (aka Hoskuld) na 1974): Obi ike, Eziokwu, Nsọpụrụ, Iguzosi ike n'ihe, cipdọ aka ná ntị, ile ọbịa, Selfdabere na Onwe ya, ịdị uchu na ịnọgidesi ike (Comunità Odinista website nd; Zoccatelli 2013).
Dị ka akara nke Langobardia Major, aha ndị ọkọ akụkọ ihe mere eme na-akọwa Alaeze oge ochie Lombard, CO na-ekerịta, ya na ndị Odinist ndị ọzọ, ọkọlọtọ. [Foto dị n'aka nri] Na ọkọlọtọ a, e nwere ugo nke anụ ọhịa, anụ dị nsọ maka ọdịnala Odinic, na onye na-agba ọsọ Othala (site n'okwu German Odal maka ókèala, ihe onwunwe, mmezi) na igbe nke metụtara ihe ochie German na ihe nketa ime mmụọ. Ihe na-acha uhie uhie bụ ọbara nke ndị nna nna ha wụsịrị (gbadara ọkọlọtọ alaeze nke Barbarossa na uwe ndị agha), "X" na-acha ọcha bụ rune Gebo (site na proto-Germanic gebô nke ahụ pụtara "onyinye") nke na-egosipụta onyinye nke chi dị iche iche nke ụwa nyere ndị Lombards na ngwụcha njem ha (Comunità Odinista webụsaịtị nd).
Ihe nnọchianya ọzọ dị mkpa maka otu ahụ bụ Raven Pụrụ Iche na rune Othala. Ugoloọma bụ nnụnụ jikọtara na chi Odin / Godan. Ọkọlọtọ na-akọwapụta mbido mmụọ na nchekwa nke ala nna nna ha (Comunità Odinista webụsaịtị nd).
Banyere usoro mmụta okpukpe, CO na-efe chi chi nwanyị na chi nwanyị sitere na usoro nkwenkwe tupu oge Ndị Kraịst n'etiti ndị German dị iche iche nke Europe. Okirikiri nke ndụ-ọnwụ-ịlọ ụwa nke mmadụ na anụmanụ ndụ, nke oge na ọdịdị niile dị mkpa na nkwenkwe ha. Ejiri chi abụọ n'ime ezinụlọ abụọ, Æsir na Vanir. N'ime ezinụlọ nke mbụ bụ chi dị ka Godan, Frea (aha ndị chi ochie Odin na Frigg), Thor, Týr, Baldr, ebe ezinụlọ nke abụọ bụ Njörðr, Freyr na Freyja. A naghị ahụ ha anya na ngalaba ihe onwunwe, mana ha dị adị ma dị ugbu a na ụwa itoolu nke Nordic cosmology na akara na archetypes a na-ahụ anya na ngalaba dị nro (weebụsaịtị Comunità Odinista nd; Zoccatelli 2013).
Emume na emume bụ ihe dị mkpa na ndụ obodo. CO na-eji okwu oge ochie blótar (iche, ihie), iji gosi emume ndi ha na achuru chi ha. N'oge gara aga, ihe omume ndị a na-abụkarị iji anụmanụ achụ àjà, mana ha anaghịzi eme. Na CO, ọ dị ezigbo mkpa ị paya ntị na ikike anụmanụ na nchedo ha; n'ezie, ọtụtụ ndị òtù dị ndị anaghị eri anụ na ha nwere usoro obibi obibi nke na-egosipụta ụkpụrụ ime mmụọ na nke okpukperechi nke obodo.
CO guzobere na 1995 na kalenda langbärte, ememe kwa ọnwa dabere na gburugburu afọ, na-amụ akwụkwọ oge ochie na kalenda ọrụ ubi German. [Foto dị n'aka nri] A pụkwara ịrara blót ahụ nye chi ọ bụla nke Norse pantheon, na CO na-eme ememe dị ka alụmdi na nwunye, olili ozu, mmemme maka ụmụ amụrụ ọhụrụ na itinye ego nke ndị otu ọhụụ. A na-eme ememme ndị a n'abalị, n'èzí, n'ụlọ nsọ ndị a na-akpọ halgadom, mana ha nwekwara ike ịme na nzuzo. Onye ụkọchukwu, ndị Goði, na-eduzi blót ahụ, ma ndị òtù niile na-ekere òkè. Ememe a nwere oge mbụ nke ịdị ọcha na ntụgharị uche na-esote ọkụ nke ọkụ dị nsọ, nke na-anọchite anya njikọ dị n'etiti ụmụ nwoke na nne ụwa. Emere emume a na egwu nke galdrar (iche, galdr), ihe anyị nwere ike ịtụgharị na incantations. Mgbe nke ahụ gasịrị, ha na-enyocha futhark, mkpụrụedemede runic, wee dezie ala ahụ na Thorshammer, ngwa ọgụ dị nsọ na akara nke Thor. N'ụzọ dị otú a, ihe ọ drinkụ theụ ahụ na-aghọ isi iyi nke ihe ọmụma, a wụsara ya n'ala dị nsọ dị ka libation ma kesaa ma tinye ya na ndị otu niile na-arụ ọrụ. Nke a gụnyere nna nna niile na mmụọ obodo dịka Alfar na Disir. Ọ bụ ụdị ịchụ onwe ha n'àjà nye chi dị ka Odin / Godan mere na akụkọ Poet Edda (Comunità Odinista website nd; Zoccatelli 2013).
Omume ọzọ nke CO na-eme bụ ihe a na-akpọ "ihe" ahụ. Ndị a bụ nzukọ nke a na-atụle ma na-achịkwa nzukọ dị n'ime otu na ihe ndị a na-eme na mpụga (Comunità Odinista webụsaịtị nd; ​​Zoccatelli 2013).
Ebughị ememe CO ka ọ bụrụ mmezigharị akụkọ ihe mere eme. Kama nke ahụ, a na-ezube ha ime ka okwukwe ahụ kwekọọ na mkpa nke narị afọ nke iri abụọ na otu iji mee ka Odinism bụrụ azịza ziri ezi ma dị ugbu a maka ndị mmadụ, ndị ejikọtara na ndụ nke oge a.
Ndị obodo enweghị nzukọ nhazi, mana ahaziri ya iji kwado onyinye nke onye otu ọ bụla. The Corte di Gambara [Foto dị n'aka nri] bụ kansụl na-achịkwa nke CO; aha ahụ na-ezo aka n'akụkọ ifo onye ụkọchukwu na onye ndu nke ndị Lombards oge ochie. Kansụl na-ehiwe ma hazie blótar ahụ, ihe "ihe," na ihe omume ndi ozo ndi ozo. Ọ na - ekwu banyere nguzobe nke ndị na - arịọ arịrịọ, Goðar, (dị iche, Goði) ma na - akpachapụ anya maka nnabata ndị otu ọhụrụ. COlọ ọrụ gọọmentị CO, L'Araldo di Thule, a na-atụle (dị ka kalenda, akwụkwọ I fuochi di Gambara na nzukọ Odinista) ngwá ọrụ ọzụzụ metụtara naanị ndị otu.
N'oge gara aga, e kewara CO na mpaghara mpaghara, a na-akpọ fratellanze, (òtù ụmụnna), dabere na mpaghara dị iche iche. Taa a ka na-asọpụrụ ma na-agba ume nnwere onwe nke mpaghara dị iche iche, ọ bụ ezie na enweghị ndị otu gọọmentị ma ọ bụ òtù ụmụnna ebe ọ bụ na a na-achịkwa CO (Central Comunità Odinista website nd; Zoccatelli 2013).
Hundingr-Gisulf, onye nchoputa CO, ka na-arụ ọrụ nke Goði ma nwee aha "Goði nke obodo niile." Ya mere, n'oge emume a bụ onye na - akpọ ndị Lombard niile. Na 2017, Hundingr-Gisulf hapụrụ njikwa nke CO iji nyefee onwe ya kpamkpam na ntụgharị uche na itinye aka na ọrụ CO, na-ahapụ ọrụ nhazi na Corte di Gambara.
CO na-ezerekarị mgbasa ozi ozugbo; ndi otu a enweghi mmasi na ime ka ndi mmadu gbanwee na ime ka onu ogugu ha bawanye. Ha na-anabata naanị ndị nwere nnukwu mmasị ịmalite ụzọ ime mmụọ dị mkpa.
Ha na-elekwasị anya na obodo, nke a na-ewere dị ka ezinụlọ, na na nketa ime mmụọ nke a ga-echekwa ma nyefee ụmụ ha. Ha anoghi na onodu ndi mmadu, ndi nmekorita ma obu nke echiche (site na nkwenye ndi ochichi) nke ndi otu okpukpe ndi ozo na ndi ozo. Maka ebumnuche ndị a, ha ajụla onyinye dị iche iche a na-enye ha. Ugbu a CO nwere mmekọrịta chiri anya naanị na ndị otu Bekee bụ Odinic Rite.
CO na-ezube onwe ya ịbụ ngagharị na-enweghị njirimara ndọrọ ndọrọ ọchịchị na nke echiche, yabụ otu a anaghị achọ ịmara ọkwa nke steeti dị ka nzukọ okpukpe. CO na-ele nkwenye dị otú ahụ anya dị ka echiche nke ugbu a na nke na-emebi emebi, na-enweghị mmetụta ma ọ bụ uru ọ bụla. CO na-anọnyere nnwere onwe ya na ụlọ ọrụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị niile, ndị otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị, nchịkwa na ya anaghị anabata onyinye ego ọ bụla. Ndi otu nke CO abanyela na obodo ndi Italia nke ugbua, mana banyere ndu ime mmuo ha anabataghi Italytali nke oge a dika ndi na-ekwu banyere omenala ha. Obodo ha n'ezie bụ Langbard. Mmekọrịta ha na astali dị ka mba bụ naanị nkwalite iwu iwu, ịkwanyere iwu, na ịkwụ ụgwọ ụtụ isi (Comunità Odinista webụsaịtị nd; ​​Zoccatelli 2013).
Foto # 1: Akara njirimara nke CO na ụkpụrụ Faith-Folk-Familiy. Nwepu ikike site na Comunità Odinista. Ikike niile echekwabara.
Image # 2: Flag nke Langbard.
Foto #3: Atụmatụ blótar nke oge na kwa ọnwa.
Foto # 4: nzukọ CO.
Weebụsaịtị Comunità Odinista. nd Nweta site na http://www.comunitaodinista.org/homepageco.htm na 20 May 2018.
Introvigne, Massimo na Zoccatelli, Pierluigi. 2013. "Ime mmụọ nke tradizionali e celtiche e nostalgie sciamaniche." Pp. 7-47 n'ime Enciclopedia delle religioni na Italia, nke Massimo Introvigne na PierLuigi Zoccatelli deziri. Torino: ElleDiCi.
Zoccatelli, PierLuigi. 2013. “La nostra patria si chiama Langbard. Nkwado niile Comunità Odinista. ” Pp. 71-90 n'ime Enciclopedia delle religioni na Italia, nke Massimo Introvigne na PierLuigi Zoccatelli deziri. Torino: ElleDiCi ..